Nọgide na-enwe nchekwube ma nọgide na-ekwere. Ihe ka nma n’iru. - Amaghi ama - Quedia Pedia
Aheadga n’ihu n’oge nsogbu nwere ike bụrụ ihe ịma aka mana Ndi mmadu nke gha emeri egwu ha na-aga n'ihu bụ ndị na-apụta nke ọma. Ikwesiri inwe uche doro anya mgbe nsogbu di.
Ikwesiri iguzoro onwe gi na otutu ndi ozo choro enyemaka gi. Ndụ ga-ewetara gị nsogbu. Ọ bụ ihe a na - apụghị izere ezere ma inwe ike ịme lemonades mgbe ndụ na - enye gị lemons bụ ihe na - enyere gị aka ịpụta na nhụjuanya. Ihe kpatara nke a bụ site n'ike dị mma na olile anya na ihe dị mma ga-eme.
Ikwesiri ikwere na onwe gị ma ghọta na ị ga-enweta ike iji lụso ihe na-abịa abịa ọgụ. Will ga - abụ onye na - alụ ọgụ ma na - akpali ndị ọzọ. N'akụkụ, olileanya ga-enyere anyị aka ịga n'ihu dịka ọha mmadụ.
Ọbụlagodi na ndụ nke onwe gị, mara oke ikuku ọ bụla na-erute gị, mara na 'nke a ga-agabiga'. Naanị ịchọrọ idozi mkpebi na mkparịta ụka ma lelee anya. Na eche mgbe nile na ihe di odi nma n ’odi n’ inweta ezi n ’echiche ahu.
Soro onwe gị na ndị toro eto na ndị ga-anọ n'azụ gị mgbe ihe siri ike. Gụọ akwụkwọ site n'aka ndị ode akwụkwọ na-akọ nkọ ma nyere gị aka ịnagide echiche gị. Nke a ga - agbakwunye ike gị ma nyere gị aka ilepụ anya na ndụ.
Positivenọgide na-enwe ọfụma na-eme ka ị nwee olile anya ma na-enye gị ike imezi oke gị. Ọ na-ebelata ụjọ gị ma na-ahapụ gị ịnwa ohere nke ga-eme ka ị pụọ n'ọnọdụ ahụ. Nke a bụ ihe n'ikpeazụ na-eduga n'ikpezi ma anyị na-enwe mmeri imeri ihe isi ike, na-aga n'ihu na ndụ.
Ikwere n’ime onwe gị Quotes
Nkwuputa okwu na okwu
Inweta okwu ndi ozo
Nọgidenụ na-kwenyere na Quotes
Lee okwu ndi ozo
Kwụsị ilekwasị anya n’otú isi eruru gị ala ma cheta etu esi agọzi gị. - Amaghi ama
Ọ dị mkpa ịghọta na ndụ anyị niile nwere nsogbu. Anyị nwere ike ịnọgidesie ike na-eche maka…
Alonenọdụ naanị gị ka mma ịnọnyere ndị mejọrọ gị. - Amaghi ama
Alonenọdụ naanị gị ka mma ịnọnyere ndị mejọrọ gị. N'oge ụfọdụ, ịchọrọ inwe…
N'agbanyeghị oge ọ ga-ewe, ọ ga-aka nke ọma. Ọnọdụ siri ike na-eme ka mmadụ sie ike na njedebe. - Amaghi ama
Enwere okwu a ma ama na mgbe ọnọdụ siri ike, na ọ bụ naanị ihe isi ike ga-aga. N'ezie, nke a pụtara…
Ka ị na-etolite, ị ga - achọ n'ezie ka ndị ezigbo mmadụ gbaa gị gburugburu. Ndi mmadu diri gi nma, diri gi nma, ma dikwa mma. - Amaghi ama
Ka ị na-eto, ị ga-achọ naanị ka ndị ọma nọrọ gị. Will ga - eji nwayọ nwayọ…
Omume gị gara aga abụtụghị mmejọ ma ọ bụrụ na ị mụtara na ya. - Amaghi ama
Ọkachamara ama ama na onye echiche pụtara ìhè Albert Einstein kwuru na onye na-emebeghị…